Herinandro ihany dia fisaka ny kibo … ireto ny tsiambaratelo !
Herinandro ihany no omenay anao dia ho fisaka tsara sy hitsatoka tsara ao anaty akanjo mihaja io kibonao io mandritra ny fety izay efa ho avy. Fomba tsotra fotsiny ihany koa no arahina. Ireto ny torohevitra, araho antsakany sy andavany dia ho azonao ny vokatra mahafa-po …
Ny sakafo no tena mila fitandremana indrindra raha te hampihena ny kibo ao anatin’ny fotoana fohy. Ilaina ny misakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana tsara raha te hahita vokatra haingana. Tsy midika akory izany fa mila misakafo be na ihany koa manaraka « régime » mandritra ny fotoana voafetra. Ny tokony hatao dia mihinana sakafo mitondra otrikaina ao anatin’ny iray andro. Tokony hisakafo ara-dalàna amin’ny maraina, ny antoandro, hariva ary azo atao tsara mihitsy ny mihinan-kanina ara-pahasalamana kely eny anelanelan’ny sakafo.
Manao fampihetseham-batana mandritra ny herinandro
Tena manampy be amin’ny fampihenana ny kibo ny fampiasam-batana. Ilaina amin’izany mantsy ny fiverimberenan’ny fihetsehan’ny vatana. Mandritra ny 7 andro dia tokony hanao fanatanjahantena mandritra ny 30min isan’andro eo ny olona te hampihena kibo. Ny tena tsara dia ny lomano, ny fitaingenana bisikileta, ny hazakazaka madinidinika ary ny “fitness”.
Mampalefaka ny hozatra ny fanorana ny kibo ka manamora ny fandoroan’ny vatana ny tavy izany. Izay no ilana ny otra amin’ny fampihenana ny kibo.
Ireo rehetra ireo, atao mitohy ao anatin’ny herinandro no ahitana vokatra tsara, sy vetivety.